Sandals waxay siisaa fasaxyo bilaash ah 300 shaqaalaha daryeelka caafimaadka Caribbean
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Sandals waxay siisaa fasaxyo bilaash ah 300 shaqaalaha daryeelka caafimaadka Caribbean
Wararka Antigua & Barbuda • Bahamas News Breaking • Barbados News Breaking • Caribbean • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • jiga • Waajib ah • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Turks iyo Caicos Breaking News • Wararka kala duwan
Sandals waxay bixisaa fasaxyo bilaash ah
Sandals Resorts International waxay ku dhawaaqday bishan go'aankeeda inay siiso 300 shaqaale daryeel caafimaad oo ku baahsan jasiiradaha Caribbean-ka oo ay ku shaqeyso mahadnaq 2-habeen joogitaan abaalmarinno abaalmarin ah oo loo dhan yahay.
Tani waxay u ahayd sanad aad u adag qof walba gaar ahaan geesiyaasha jiidaha hore iyo howlwadeenadeena daryeelka caafimaadka.
Geesinimadooda iyo allabaryadooda, Sandals Resorts waxay ku abaalmarinaysaa shaqaalaha daryeelka caafimaadka fasaxyo bilaash ah.
Laga bilaabo shaqaalaha Jamaica waxay sidoo kale heli doonaan fasaxyo bilaash ah Antigua, Barbados, The Bahamas, Grenada, Saint Lucia, iyo The Turks iyo Caicos Islands.
Guddoomiyaha Fulinta Sandals, Adam Stewart, ayaa sheegay in tilmaantan ay tahay mid lagu aqoonsanayo dadaalka naf-hurnimada ah ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka maxalliga ah ee gobolka oo dhan, kuwaas oo sii wadaya in ay muujiyaan geesinimo lagu kalsoonaan karo isla markaana ay ku bixiyaan allabaryo aad u weyn wajiga hore ee waxa hadda noqday dagaal sannad socday.
Stewart ayaa yiri: "Shaqaalaheena daryeelka caafimaadka waxay ahaayeen geesiyaasheena intii uu socday cudurkaan. "Tani waxay ahayd sanad aad u adag qof walba laakiin geesiyaasheena safka hore iyo shaqaalaheena daryeelka caafimaadka gaar ahaan waxay muujiyeen heer adkaysi iyo balanqaad taas oo ah mid laga naxo. Sidan ayaa ah habka aan ku dhahno mahadsanid oo aan ku muujino qadarinta aan u leenahay waxa aan ognahay inay ahayd waqti aad u adag. Fasaxyadan ayaa ah kuwo loo qalmay mana sugi karno intaan roogga cas-ka soo bixinayno oo aan ku dhiirrigelinno halyeeyadeenna meelaha nasashada leh ee lagu daray.
Shirkadda dalxiiska waxay si dhow ula shaqeyn doontaa Wasaaradaha Caafimaadka ee toddobada jasiiradood halkaas oo ay ka hawlgasho si loo ogaado ka-faa'iideystayaasha ficilkii ugu dambeeyay, laga bilaabo Jamaica halkaas oo shirkaddu ay kala shaqeyneyso Waaxda Barnaamijyada Daryeelka Shaqaalaha ee Wasaaradda Caafimaadka si loo siiyo hadiyado dhowr jasiiradood shaqaalaha daryeelka caafimaadka oo leh fasaxyo aad ugu qalmay.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee Antigua, Barbados, The Bahamas, Grenada, Saint Lucia iyo The Turks iyo Caicos Islands ayaa sidoo kale lagu wadaa inay helaan fasaxyo bilaash ah.
Tan iyo bilowgii dhibaatada COVID-19, Kooxda Sandals Group waxay si isdaba joog ah u taageertay dagaalka, iyagoo ka taageeraya dowladaha gobolka dadaalkooda ku aadan la dagaalanka cudurka iyo la wadaaga dokumentiyada adag ee Platinum ee Nadaafadda oo ay la wadaagaan ururada socdaalka iyo dalxiiska iyo dalxiisyada kale. si ay gacan uga geysato dib u furista nabadgelyada ee warshadaha dalxiiska gobolka guud ahaan.
Stewart oo ka hadlayey dadaalka joogtada ah ee shirkadda, wuxuu yiri, “Dagaalkan ma ahan mid kaliya loogu talagalay Dowladda. Tani waa dagaalka qof walba. Waajibaadka gaarka loo leeyahay waa inay gacmaha la qabsadaan waaxda dawladda si aan wadajir ula dagaallano cudurkan faafa. Dhammaanteen waa nala saameeyay cudurkan faafa waxaana sii wadaynaa inuu na saameeyo hal sano kadib. Tani waa caqabad kasta oo qof walbana xal u heliddu waa inay noqotaa mid qof walba meheraddiisa leedahay. Sandals Resorts International wali wey naga go'an tahay inaan doorkeena ka ciyaarno waana ku faraxsanahay inaan awoodno inaan fidino dalabkan ugu dambeeyay shaqaalaheena daryeelka caafimaadka ee aadka u qalmay. ”
Si aad wax badan uga barato Sandals Resorts International, booqo: https://www.sandals.com/about/
Caribbean jamaica kabahaaga Goobaha Sandals